OR What doc did the police give me | Refugee Info Bus
Poolisiin sanada akkamii natti kennuu mala?
Sanadiin poolisiin sitti kennuu malu gosa gurgurdaa 2 tu jira:
Kan “Procès Verbal” fi/ykn
Ka “Obligation de Quitter le Territoire Français” (OQTF)
Kan “Procès Verbal” jedhamu maaliidha?
Kan “procès verbal” jedhamu sanada poolisiidhaan barreeffamee fi gabaasa taateewwanii uf keessatti hammateedha. 'proces verbal' kan siif kennamus karaa lamaan (1) sababa sakattaa eenyummaatiif poolisiidhaan yoo qabamte ykn (2) Sababa ati yakka hojjatteef ykn yakka hojjachuuf yaalteef poolisiin yoo si hidhe “garde à vue” keessa si galche).
Sanada “procès verbal” qabaachuu jechuun poolisiin irra deebi'ee akka si hin hiine dhoorka jechuu miti (qabatamatti Kaale fi Daankirik keessatti yeroo tokko tokko irra deebi'anii si hin hidhan)
Sanada Procès Verbal Yoo sitti kenname maal goota?
Sanada “procès verbal” sitti kenname irratti akka mallatteessituuf ni gaafatamta, haa ta'uu garuu “procès verbal” mallatteessuun sirra hin jiraatu. Wontoota barreeffamanii fi sitti himaman hunda irratti hanga woliif galtutti sanada “procès verbal” irratti hin mallatteessin. Sababiin isaas wantoota hin raawwataminii fi sirri hin taane irratti akka waliif galte ibsuu danda'a waan ta'eef. Haa ta'uu garuu, kan hin mallatteessine ta'us uf eeggannoon afaanii kan galmaahu ta'a.
Sanada “proces verbal” fi kan “Obligation de Quitter le Territoire Français” (OQTF) wolitti maxxansuun siif kennu. Sanadni siif kennamu sun “proces verbal” sanada biraa kan biyya Faransay gad lakkiftee bahuu akka sirra jiru mirkaneeffadhu.
“Obligation de Quitter le Territoire Français” jechuun, ajaja (murtii) biyya Faransay gadi lakkisanii bahuuti. Sanada murteessaa ta'ee fi baqataan biyya Faransay gadi lakkisee akka bahu taasisuu fi akka biyya gafi lakkiftee baatuuf si dirqamsiisuudha. Inni kunis kan ta'u yoo woraqaa eeyyama jireenyaa hin qabnee fi mirgi biyya Faransay jiraachuu hin jirreedha. Akkasumas iyyatni koolugaltummaa kee kan diddaa argate ykn eeyyamni jireenyaa kee kan yeroon irra darbe yoo ta'eedha. Woraqaan OQTF yeroo baay'ee kan sitti kennamu yeroo sakattaan eenyummaa taasifamutti. Kana mirkaneessuufis ashaaraa quba kee fuudhuudhaan mirga biyya Faransay jiraachuu qabaachuu fi qabaachuu dhabuun kee kan ittin mirkanaahuudha.
Haala baratamaa ta'een woraqaan OQTF yeroo jedhame keessatti hatattamaan akka biyya gad lakkiftu ibsa, kana jechuun sa'aatii 48 keessatti biyya Faransay gad lakkisuudha. Yeroo jedhame keessatti kan biyya gad hin lakkifne yoo ta'e, mana hidhaa galuu ykn hidhaa mana kee keessaa sitti murtaahu mala. Kunis kan hojii irra oolu erga murtiin sirratti darbee woggaa tokko booda.
Woraqaan OQTF yoo sitti kenname maal gochuu qabda?
Murtii OQTF dha mormachuudhaaf sa'aatii 48 qabda. Kanaafuu yeroo gabaaba keessatti gorsa seeraa argachuutu sirraa eeggama:
Kan jirtu Kaale (Calais) yoo ta'e tola-ooltota dubbisuun guca gara La Cabane/Legal Shelter akka siif barreessan taasisi.
Kan jirtu Daankirik (Dunkerque) yoo ta'e tola-ooltonni guca gara La Cimade akka siif barreessan gaafadhu.
Ijoollee umurii kudha saddeetii gadii yoo taate fi woraqaan OQTF sitti kenname, tola-ooltota dubbisuudhaan guca gara Refugee Youth Service akka siif barreessan gaafadhu.